Bogga ugu weyn Barnaamijyada Kuuban ee ugu Fiican ee loogu talagalay Isticmaalayaasha Android sanadka 2022 | Hadda Soo Dejiso
Marka, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo inaan ku weydiiyo su'aal aad u fudud waxaanan rajaynayaa inaadan waxba ka qabin. Bal ii sheeg, yaa aan jeclayn in xoogaa xoogaa lacag ah ah laga jaro qiimaha buuxa mar kasta oo ay dukaamaysiga ka baxayaan? Aniga ma ihi, waana sharadayn karaa, adiguna sidoo kale.
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu dib ugu soo celiyo xoogaa lacag ah oo lacag la’aan ah jeebabka si uu u helo heshiiska buuxa ee alaabta uu doonayo inuu iibsado. Waxaan rabaa inaan ku tuso sida aad tan u samayn karto mar walba adiga oo aan walwal lahayn.
Waxaa jira siyaabo badan oo tan loo sameeyo laakiin waxaan rabaa inaan tuso mid ka mid ah siyaabaha badan ee jira.
Barnaamijyada kuubboonku waa furahaaga ugu fiican! Waxaa jira tiro iyaga ka mid ah oo kaa caawin kara inaad hesho heshiisyada iibka ugu fiican iibsi kasta oo aad rabto inaad sameyso.
Maqaalkan, waxaan ku tusayaa barnaamijyada kuuboon ee ugu fiican oo aad u baahan tahay inaad hadda soo dejiso gaar ahaan haddii aad tahay isticmaale android ah.
Dhanka kale, ka fiiri miiska dulucda hoose si aad u dhugato waxaad ka heli doonto maqaalkan.
Barnaamijyada Kuubboon ee ugu Fiican Isticmaalayaasha Android
Markaa waa kuwan barnaamijyada kuuboon ee ugu fiican oo aad u adeegsan karto dhammaan dukaamaysigaaga. Waxay si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala android kaliya. Soo dejiso oo bilow inaad hadda isticmaasho si aad ugu raaxaysato dhammaan waxay bixiyaan.
Coupon.com waa madal onlayn ah oo kuu oggolaanaysa inaad u hesho rasiidh dukaamo raashin ah oo kala duwan, iyo sidoo kale bakhaarro waaweyn sida Target iyo Walmart.
Waxay asal ahaan u shaqeysaa adiga oo kuu oggolaanaya inaad marin u hesho boqolaal rasiidh oo bilaa warqad ah intaad wax iibsaneyso ama guriga ka hor intaadan dukaanka aadin.
XIDHIIDHKA: 20 Adeegyada Bixinta Ugu Fiican ee Loo Shaqayn Doono 2022
Waxaa lagugula talinayaa inaad daarto badhanka goobta taleefankaaga si aad u hesho heshiisyo kuuboon kuu dhow.
App -kan badanaa wuxuu la shaqeeyaa a Gawaarida kaas oo ah habka kaydinta oo u oggolaanaya dadka wax iibsada inay raadsadaan oo ay doortaan dalabyo u dhigma badeecadaha ay iibsanayaan.
Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo si fudud u furaya barnaamijka ka dibna ku dara dalabyada liiskaaga. Kadib, tus taleefankaaga diiwaanka si aad u hesho rasiidhada lagu dabaqo macaamilkaaga.
Ibotta waa mid ka mid ah barnaamijyada kuuboon ugu fiican ee adeegsadayaasha android ee ka shaqeeya barnaamijka abaal -marinta lacagta caddaanka ah. Waxay ku shaqeysaa adiga oo kuu oggolaanaya inaad hesho heshiisyo aad wax kaga iibsato dukaamo gaar ah.
Waxaad markaa kasban doontaa lacag -celin oo aad ku bixin karto koontada PayPal. Waxa xiiso leh, waxaad u adeegsan kartaa Ibotta barnaamijyada kale sida Groupon si aad isugu darto kaydinta iyo kaashka.
Flipp waa mid ka mid ah barnaamijyada kuuboon ugu fiican ee adeegsadayaasha android. Waxay bixisaa nooc kasta oo heshiisyo ah maalin kasta ama toddobaadle kaas oo kaa caawin kara inaad lacag ku badbaadiso.
Mid ka mid ah astaamaha gaarka ah waa kartida aad ku iibsan karto kuuban oo aad ku dhejin karto kaarkaaga daacadnimada. Habkaas waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad xasuusnaato inaad kaadhkaaga daacadnimada ku mariso goob -bixinta si aad u hesho dhammaan heshiisyada.
Waxay kaloo leedahay astaamo dheeri ah oo kuu oggolaanaya inaad hesho ogeysiisyo ku saabsan rasiidh cusub ama dhacaya, Waxay siisaa taageero 800+ tafaariiqle. Appku waa u bilaash in la soo dejiyo oo la isticmaalo.
Barnaamijka ShopSavvy asal ahaan waa iskaanka barcode. Waxay la shaqeysaa meesha taleefankaaga si ay kaaga caawiso inaad hesho heshiisyo kuu dhow.
XIDHIIDHKA: 10ka Kamarada Amniga Baabuurka ee ugu Fiican 2022
Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa hubinta qiimaha badeecada adiga oo iska baaraya barcode -ka badeecadda
Intaas waxaa sii dheer, appku wuxuu ku siinayaa macluumaadka badeecada si si fiican kaaga caawiya inaad go'aansato waxaad iibsaneyso.
6. Kuuboonada App
App Coupons waa isku -darka heshiisyada, rasiidhada, iyo koodhadhka xayeysiinta ee ka badan 100,000 oo tafaariiqle ah. Waxaad u adeegsan kartaa si aad u abuurto liistada tafaariiqleyaasha aad jeceshahay, baari dukaanka iyo heshiisyada makhaayadda, oo fiiri xayeysiisyada toddobaadlaha ah.
Slickdeals maahan daruuri app kuuboon. Si kastaba ha noqotee, waxay wali kaa caawineysaa inaad aqoonsato heshiisyo waaweyn oo kala duwan oo laga helo goobo kala duwan.
Intaa waxaa sii dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ogaato waxyaabo ay ka mid yihiin isku -dheelitirka qiimaha, dhacdooyinka iibka, iyo fursadaha kale si aad u hesho alaab wanaagsan lacag yar.
Waxay leedahay hal dhib oo dhibsado; ogeysiisyada ayaa runtii kaa xanaajin kara. Laakiin marka laga reebo tan, waa app adag oo ku saabsan heshiisyada iyo iibinta. Sidoo kale waa bilaash inaad soo dejiso.
Waxaad ku hubsan kartaa barnaamijyadan kuuboon in aadan si weyn ugu bixin doonin raashinka iyo sahayda maalinlaha ah marka xigta ee aad dukaamaysiga aadaysid.
Hubi inaad soo dejiso barnaamijyada hadda oo bilow inaad isla markiiba isticmaasho si aad ugu raaxaysato heshiisyada qabow.
Immisa ayay ku kacaysaa in la bilaabo Podcast | Tilmaan Buuxo
10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Lacag Laga Helo eBooks -ka 2022 -ka
Sida Loo Sameeyo $ 100+ PayPal Maalin kasta (Tilmaan Buuxo)
20 Shaqooyinka Labaad ee Macallimiinta: Hustle Side for Macallimiinta
Lacag Ma Ka Heli Kartaa Tartanka Fardaha? Xaqiiqooyinka Khubarada
10 Keega Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Keega waa mid ka mid ah hadiyadaha dabiiciga ah ee hooyadu siiso aadanaha sababtoo ah waxaa jira doorasho qof kasta leh. Haddii aad…
10 Xalqada Ugu Qaalisan Ka Qaybgalka Dunida
"Jacaylku waa sariir ubaxeed halkaas oo aad diyaar u tahay inaad jiifsato ilaa inta qof kuu xaqiijinayo ...
15 Apps Like Play si fudud oo lacag caddaan ah | Lacag degdeg ah
Dhab ahaantii, qof kasta oo aad taqaan ayaa ugu yaraan hal app ku haysta taleefankiisa casriga ah. Waxay u badan tahay inaan laga tegin.…
Daqiiqad 19 akhri
15 Software -ka Podcasting -ka ugu Fiican ee ugu Fiican, Madal, iyo Codsiyada Sanadka 2022 -ka
Waxaa jira barnaamijyo badan oo bilaash ah oo podcasting ah, aalado, iyo codsiyo la heli karo maanta. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa inaan haysanno…
Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u iibsato baabuur 2022?
Dhibcaha credit-ka, amaahda baabuurta, waa muhiim. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax ka badan oo aan ahayn dhibcaha dhibcaha. Gudaha…